Su'aalaha La Weydiiyo - Warshadda Dawooyinka ee Changzhou
Waxaan, Changzhou Pharmaceutical Factory waa soo saare ah oo soo saarta in ka badan 30 nooc oo APIs iyo 120 nooc oo dhameystirtay samaynta. Laga soo bilaabo 1984, waxaan ansixiney hantidhawrka US FDA ilaa 16 jeer ilaa hadda.
Waxaan leenahay 2 shirkadood oo gebi ahaanba leh: Changzhou Wuxin iyo Nantong Chanyoo. Nantong Changzhou sidoo kale wuxuu ansixiyay xisaabinta USFDA, EUGMP, PMDA iyo CFDA.
Ma wadaagi kartaa dukumintiyada khuseeya?
Haa, waan la wadaagi karnaa COA iyo dukumintiyada la xiriira tixraaca macaamiisha.
Haddii macaamilku u baahan yahay dukumiintiyo sir ah, sida DMF, waxaa la heli karaa ka dib amarka maxkamadda ee qaybta furan ee DMF.
Waa maxay noocyada alaab bixinta ee aad aqbali karto?
Tani waxay kuxirantahay, waxaana kuhadli karnaa iyadoo lagu saleynayo amarka dhabta ah.
Tani waxay sidoo kale u baahan tahay in laga hadlo oo laga gorgortamo iyadoo lagu saleynayo mashaariic kala duwan iyo tiro kala duwan.
Caadi ahaan, tirada ugu yar waa 1kg.
Ma heli karaa shay-baarka qaarkood?
Haa, caadi ahaan, waxaan bixinnaa 20g oo ah muunad bilaash ah si aan u taageerno macaamiisha.
Waa maxay habka gaadiidka?
Tiro yar, waxaan ku rari karnaa hawada; oo haddii tan oo tiro ah, waxaan ku daabuli lahayn badda.
Sidee baan u dalban karnaa amar?
Waxaad u diri kartaa weydiinta emailkan: shm@czpharma.com. Kadib xaqiijinta labadayada dhinac, waxaan xaqiijin karnaa amarka, oo waxaan usii soconaa xiga.
Sideen kula soo xiriiri karnaa?
Waxaad noo soo diri kartaa emayl: shm@czpharma.com.
Ama waxaad wici kartaa telefoonka: +86 519 88821493.
Ma bixin kartaa liiska macaamiisha?
Waxaan horeyba ulashaqeynay macaamiil badan oo caalami ah, sida: Novartis, Sanofi, GSK, Astrazeneca, Merck, Roche, Teva, Pfizer, Apotex, Sun Pharma. iyo ECT.
Muxuu yahay xiriirkaaga Warshada Daawada ee Changzhou iyo Nantong Chanyoo Pharmatech Co., Ltd.?
Nantong Chanyoo waa soosaaraheena oo dhan oo ay leedahay Warshada dawooyinka ee Changzhou.
Waa maxay xiriirka u dhexeeya Warshad Dawooyinka Changzhou iyo Shanghai Pharma. Koox?
Warshadda dawooyinka ee Changzhou waa mid ka mid ah shirkadaha warshadaha aasaasiga ah ee Shanghai Pharma. Koox.
Ma haysaa shahaadada GMP?
Haa, waxaan haynaa shahaadada GMP ee Hydrochlorothiazide, Captopril iyo ect.
Waa maxay shahaadooyinka aad haysaa?
Alaabadayada kaladuwan waxay leeyihiin shahaadooyin kaladuwan, oo caadi ahaan, waxaan haysannaa US DMF, US DMF, CEP, WC, PMDA, EUGMP, sida: Rosuvastatin.
Waa maxay cinwaanada sharafeed ee aad haysaa?
Waxaan haynaa in ka badan 50 cinwaan sharaf, sida: Top 100 warshadaha dawooyinka ee Shiinaha; Shirkadda qiimaha sharafta; Dawladdu waxay u qoondeysay shirkad wax soo saar dawooyinka aasaasiga ah; Shirkadda AAA ee heerka Shiinaha; Summad dhoofinta API heer qaran ah; Shiinaha HI-tech ganacsi; Waxqabadka qandaraaska iyo kalsoonida shirkadda mudan; Ganacsiga bandhig qaran ee tayada daroogada iyo daacadnimada.
Waa maxay mugga iibkaaga sanadlaha ah?
2018, waxaan gaarnay USD88000. Heerka kobaca sanadlahana wuxuu gaarayaa 5.52%.
Ma leedahay koox R&D ah?
Haa, waxaan leenahay 2 R&D xarumood oo mas'uul ka ah horumarinta API-yada iyo qaabab dhameystiran. Waxaan ku maal-galineynaa 80% mugga iibkeenna R&D sannad kasta. Waqtigaan la joogo, noocyada dhuumaha R & D waxaa ka mid ah 31 generics, 20 APIS, 9 ANDAs iyo 18 alaab qiimeyn joogta ah.
Immisa aqoon-isweydaarsi ayaad haysaa?
Waxaan haynaa 16 aqoon isweydaarsi loogu talagalay dhammaan noocyada wax soo saarka.
Waa maxay awooddaada wax soo saar sanadle ah?
Waxaan soo saarnaa 1000+ tan sanadkii.
Waa maxay qaybta ay shirkaddaadu ku takhasustay?
Waxaan khibrad u leenahay Wadnaha, Wadnaha, Xanuunada antipyretic, Faytamiin, Antibiyootikada iyo injineernimada daryeelka caafimaadka, iyo sida loogu yeero: "Khabiirka Wadnaha-Cerebrovascular".